Radio Don Bosco - Zenit
Naseho ny : 13 desambra 2019
Ankalazaina isaky ny 12 desambra ny fetin'i Notre-Dame-de-Guadalupe. Nitarika ny Eokaristia Masina ho fanamarihana izany tao Vatican, omaly, i Papa François izay Papa latino-amerikanina voalohany.
Fihaonan'ny praiminisitra slovaque tamin'i Papa François
Naseho ny : 10 desambra 2019
Vahinin'i Papa François tao VAtican, omaly alatsinainy, ny praiminisitra slovaque Peter Pellegrini. Isan'ny nivoitra tamin'io fihaonana io ny fanasan'andriamatoa Pellegrini an'i Papa hivahiny any Slovaquie.
Nitsidika ny fampirantiana Tranonomby i Papa François
Nitsidika ilay fampirantiana momba ny Tranonomby, tanterahina tsy lavitra an'i Vatican, i Papa François, ny tolakandron'ny alatsinainy teo.
Fanendrena ny Kardinaly Tagle
Naseho ny : 9 desambra 2019
Notendren'i Papa François ho préfet-n'ny kongregasiona misahana ny fanelezana ny Vaovao Mahafaly, ny alahady 8 desambra teo, ny Kardinaly Luis Antonio Tagle.
Pejy 5 amin'ny 6